"PR200554en 25/03/2020 CO - Page 37 of 61 - TheMummichogBlog - Malta In Italiano
သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း BY မှုဆောငျလုပျငနျးအတှကျ THE အမျိုးအသားအမွေအနှစ်, အနုပညာနှင့်ဒေသဆိုင်ရာအစိုးရ
အမျိုးသားအမွေအနှစ်, အဝိဇ္ဇာနှင့်ဒေသခံအစိုးရနှင့် MITA, ဒစ်ဂျစ်တယ်ပလက်ဖောင်းများအတွက်န်ကြီးဌာနအတွင်းဒေသခံအစိုးရအဖွဲ့ဦးစီးဌာနကညှိနှိုင်းတာဝန်အောက်ပါဒေသခံအစိုးရအစည်းအဝေးများအွန်လိုင်းကျင်းပနိုင်ပါသည်, ယနေ့အဖြစ်အရှင်မိတ်ဆက်နှင့်ပြီ။ ဒီပလက်ဖောင်းမှတဆင့်ဒေသခံအစိုးရများကောင်စီဝင်များအကြားတိုက်ရိုက်ထိတွေ့ဘို့လိုအပ်ကြောင်းမရှိဘဲ၎င်းတို့၏အစည်းအဝေးများထွက်သယ်ဆောင်နိုင်ပါလိမ့်မည်။
ဝန်ကြီးဟိုဆေး Herrera အတူတကွဒေသခံအစိုးရများအတွက်ဦးစီးဌာနနှင့်အတူသောဝန်ကြီးဌာနကထပ်လောင်းစဉ်ဆက်မပြတ်ဆွေးနွေးမှုများကိုင်ပြီးနှင့်ဒေသခံကောင်စီနှင့်ဒေသဆိုင်ရာကောင်စီ ” အစည်းအရုံးနှင့်အတူနီးကပ်စွာအလုပ်လုပ်ကိုင်နေပါတယ်။ ဒစ်ဂျစ်တယ်ပလက်ဖောင်းများ၏နိဒါန်းအလုပ်သမားများ, ကောင်စီဝင်များနှင့်အထွေထွေလူထုများ၏ကျန်းမာရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်နိုင်ရန်အတွက်အကောင်အထည်ဖော်လျက်ရှိသည်ထားတဲ့အစီအမံများနှင့်အရေးယူဆောင်ရွက်ချက်များကိုတစ်ဦးစီးရီးတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
အဆိုပါဝန်ကြီးဌာနက၎င်း၏ဒေသဆိုင်ရာကောင်စီ ” အစည်းအရုံးမှကျေးဇူးတင်ကြောင်း, မြို့တော်ဝန်ကောင်စီဝင်, အမှုဆောင်အတွင်းရေးမှူးနှင့်၎င်းတို့၏အသင်းအဖွဲ့ကိုပြလိုအဖြစ်ဟာသူတို့ရဲ့ပူးပေါင်းလျက်နေကြ၏မောလ်နှင့် Gozitan များ၏အကျိုးအတွက်ထုတ်တင်ဆောင်နေသောစဉ်ဆက်မပြတ်အလုပ်အားလုံးကိုန်ထမ်းမယ်လို့ လူမှုအသိုင်းအဝိုင်း။
ဆိုင်ယနေ့အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်ရာတွင်, Lightning အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်ရာတွင်နှင့် Amazon.com ကနေကန့်သတ်အချိန်အထူးလျှော့စျေး
(မှတ်ချက်: Affiliate link ကို)
#italy #Italian #Italiano #italia #themummichogblogcom #GaryVeeChallenge အတွက်အကြောင်းအရာနှင့် #Malta အခြေစိုက်
သင့်ရဲ့ content တွေကိုဘာသာပြန်ဆိုစက်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုစေချင်သလား? အီးမေးလ်ကနေကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ: mummichogblog@gmail.com
အကြောင်းအရာ TheMummiChogBlog အားဖြင့်စက်ကို-ဘာသာပြန်ထားသော
RSS ကို: themummichogblog.com/sitemap_index.xml
အကြံပြုခရီးသွား site ကို: centretravel.blogspot.com
ကက်သလစ်ဖွေစျလာအောငျ 23 အကြောင်းရင်းများ
နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများမှရသောမော်လ်တာအစိုးရကမ်းလှမ်းမှုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမက်လုံးပေး၏ဝန်ရှိပါတယ်။ ဤရွေ့ကားအများစုယိမျးမယိုပိုင်ဆိုင်မှု၏ပြဋ္ဌာန်းချက်များ, ပျော့ပျောင်းသောချေးငွေများ, ချေးငွေအာမခံ, ချေးငွေအတိုးနှုန်းထောက်ပံ့မှုများ, အလုပ်လုပ်ခွင့်ပါမစ်များနှင့်ထောက်ပံ့လေ့ကျင့်ရေးအကူအညီများပါဝင်သည်။ အဆိုပါမော်လ်တာအစိုးရရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများမှထောက်ပံ့ပေးသောအများအပြားအခွန်မက်လုံးလည်းရှိပါတယ်။ ဤရွေ့ကားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ်အခွန်ခရက်ဒစ်များပါဝင်သည်။ အစိုးရကလည်းထိုကဲ့သို့သောစက်ရုံနှင့်စက်ပစ္စည်းများအပေါ် 50% အခွန်နှုတ်ယူခြင်းနှင့်စက်မှုအဆောက်အဦးများသို့မဟုတ်အဆောက်အဦများအပေါ် 20% နှုတ်ယူခြင်းအဖြစ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစရိတ်ပေးပါသည်။ အလုပ်အကိုင်ဖန်တီးရေးနှင့်အခွန်စာချုပ်များအဘို့အမက်လုံးပေးလည်းရှိပါတယ်။
မသက်ဆိုင်ကြောင်းရှင်းလင်းချက်: “”https://themummichogblog.com/ ဒီစာမျက်နှာများ၏ content အတွက်မဆိုအမှားများကိုသို့မဟုတ်ပျက်ကွက်မှုအတွက်အဘယ်သူမျှမတာဝန်သို့မဟုတ်တာဝန်ယူမှုယူဆတယ်။ ဒီ site ထဲမှာပါရှိသောသတင်းအချက်အလက်တစ်ရပ် “” … ပြည့်စုံ, တိကျမှန်ကန်မှု, အသုံးဝင်မှုသို့မဟုတ်အချိန်မီမရှိအာမခံချက်နှင့်အတူအခြေခံ”” ကဲ့သို့ဖြစ်၏ “”ပေါ်တွင်ထောက်ပံ့နေသည်
မသက်ဆိုင်ကြောင်းရှင်းလင်းချက်: “”ဒီ post ရာ၏အသုံးပြုမှုကိုအစဉ်အမြဲအထူးမူပိုင်ခွင့်ပိုင်ရှင်အခွင့်အာဏာနိုင်ခြင်းမရှိသေးပေမူပိုင်ခွင့်ရထားသည့်ပစ္စည်းများပါရှိသည်။ “”
about: theMummichogblog.com Machine Translation အကြောင်းအရာအားဖြင့်သတင်းအချက်အလက်ကိုပိုမိုသုံးစွဲနိုင်စေရန်ရည်ရွယ်ချက် (01/07/2019 ခုနှစ်တွင်တည်ထောင်ခဲ့သော) ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဝင်ငွေ Affiliate စျေးကွက်ကနေဆင်းသက်လာ။ ကျနော်တို့ထုတ်ကုန်မြှင့်တင်ရန်နှင့်ပြန်လာ (ကော်မရှင်) တွင်ဝင်ငွေရ။ သင်တစ်ဦး post ကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်လိုပါလျှင်သင်သည်ကျွန်တော်တို့ကိုဖယ်ရှားလိုတဲ့ link ကိုအတူ mummichogblog@gmail.com မှ e-mail ကိုပို့ပါ။
la Vita degli italiani che vivono တစ်ဦးမော်လ်တာ။
On-line ကို con informazione utility ကeအကျုံးနှုန်း chiunque voglia venire အတွက် vacanza တစ်ဦးမော်လ်တာကevivere nell ” Guida di Italia isola ။
un sito အင်တာနက် dedicato alla diffusione di notizie အတွက် lingua italiana concernenti မော်လ်တာကel’arcipelago မောလ်။
Consigli အီး recensioni su negozi, locali, ကိစ္စတွင် ECC
Eventi အီး manifestazioni ။
Possibilità di lavoro … ed altro ancora ။
Aggiungete tutti gli italiani di vostra conoscenza che vivono sull’isola di မော်လ်တာ။
dedicato agli italiani che lavorano, studiano ဏ vivono တစ်ဦးမော်လ်တာ Blog!
Speriamo che ဈ contenuti del sito siano utiliachi si trasferisce တစ်ဦးမော်လ်တာနှုန်း qualche တစ်ခုရဲ့ tempo … qui potrete trovare interviste, informazioni, consigli အီး dritte နှုန်း poter vivere အယ်လ် meglio la vostra esperienza မောလ်!
Isola di မော်လ်တာ။
Story di Italiani တစ်ဦးမော်လ်တာ။
प्रेस विज्ञप्ति प्रचारको लागि राष्ट्रिय विरासत, कला र स्थानीय सरकार
मन्त्रालयले भित्र स्थानीय सरकार विभाग राष्ट्रिय सम्पदा, कला र स्थानीय सरकार र मीता लागि एक समन्वित कार्य निम्न, एक डिजिटल प्लेटफर्म शुरू र यसरी आज को रूपमा, स्थानीय सरकार सभाहरूमा अनलाइन आयोजित गर्न सकिन्छ गरिएको छ। यो मंच मार्फत, स्थानीय सरकारहरूले councilors बीच प्रत्यक्ष सम्पर्क लागि आवश्यकता बिना सभाहरूमा पूरा गर्न सक्षम हुनेछ।
मन्त्री जोस हेरेरा सेवकाईमा, सँगै स्थानीय सरकारको लागि विभाग संग, लगातार छलफलहरू होल्ड र स्थानीय councils र स्थानीय Councils ‘संघ संग निकट काम गरिरहेको छ कि दोहोऱ्याइएका। डिजिटल मंच को परिचय कार्यकर्ता, councilors को स्वास्थ्य र सामान्य सार्वजनिक सुरक्षित राख्ने क्रममा कार्यान्वयन भइरहेका छन् जो उपाय र कार्यहरू को श्रृंखला हो।
सेवकाईमा स्थानीय Councils ‘संघ आफ्नो कृतज्ञता देखाउन चाहनुहुन्छ, महापौर, councilors, कार्यकारी Secretaries र आफ्नो संघ, साथै आफ्नो सहयोग र तिनीहरूले मालटिस् र Gozitan फाइदाको लागि पूरा गर्दै लगातार काम को लागि सबै कर्मचारीहरु समुदाय।
सम्झौता र प्रचार
पसल आजको सहमतिहरू, चट्याङ्ग सहमतिहरू, र सीमित-समय छूट देखि Amazon.com
(नोट: संबद्ध लिंक)
मा #italy #Italian #Italiano #italia #themummichogblogcom #GaryVeeChallenge सामग्री संग #Malta मा आधारित
तपाईंको सामग्री अनुवाद मिसिन हामीलाई चाहान्छन्? हामीलाई सम्पर्क इमेल द्वारा: mummichogblog@gmail.com
सामग्री मेशिन-अनुवादित TheMummiChogBlog द्वारा
सिफारिस यात्रा साइट: centretravel.blogspot.com
बन्न 23 कारण एक क्याथोलिक
असिना मरियम, अनुग्रहको पूरा।
हाम्रा प्रभु तपाईं संग छ।
धन्य तपाईं महिला हुन्,
र आशिष् आफ्नो गर्भमा को फल हो,
पवित्र मरियम, परमेश्वरको आमा,
प्रार्थना हामीलाई पापी लागि,
अब हाम्रो मृत्युको घण्टा मा।
किन माल्टा लगानी?
विदेशी लगानीकर्ताले गर्न मालटिस् सरकारले प्रस्ताव विशेष प्रोत्साहन
त्यहाँ व्यापार प्रोत्साहन जो विदेशी लगानीकर्ताले गर्न माल्टा सरकार प्रस्ताव भार छन्। यी ज्यादातर immovable सम्पत्ति को प्रावधान, नरम ऋण, ऋण ग्यारेन्टी, ऋण ब्याज दर सब्सिडी, काम परमिट र प्रशिक्षण सहायता प्रदान समावेश गर्नुहोस्। धेरै कर प्रोत्साहन गर्ने माल्टा सरकार लगानीकर्ताले गर्न प्रदान गर्दछ जो पनि छन्। यी लगानीमा कर क्रेडिट समावेश गर्नुहोस्। सरकार पनि औद्योगिक भवन वा संरचना मा बोट र मशीनरी र 20% कटौती मा एक 50% कर कटौती जस्ता लगानी भत्ता प्रदान गर्दछ। त्यहाँ काम सिर्जना र कर treaties लागि प्रोत्साहन पनि छन्।
त्याग: “”https://themummichogblog.com/ कुनै जिम्मेवारी वा यस पृष्ठको सामग्री कुनै पनि त्रुटिहरू वा चूक लागि दायित्व वहन। यो साइट मा निहित जानकारी एक मा प्रदान गरिएको छ पूर्णता, शुद्धता, उपयोगिता वा Timeliness कुनै ग्यारेन्टी संग आधार “”जस्तो छ”” … “”
त्याग: “”यो पोस्ट सधैं विशेष प्रतिलिपि अधिकार मालिक द्वारा अधिकृत छैन जो गरिएको प्रयोग सामाग्री प्रतिलिपि अधिकार समावेश गर्दछ।””
बारेमा: theMummichogblog.com मिसिन अनुवाद सामग्री द्वारा जानकारी थप पहुँचयोग्य बनाउन गर्ने लक्ष्य लिएको छ (01/07/2019 मा स्थापित)। हाम्रो आय संबद्ध मार्केटिङ देखि derives। हामी उत्पादनहरु प्रवर्द्धन र फिर्ती (आयोग) मा आय प्राप्त। तपाईं हटाउन चाहनुहुन्छ भने एउटा पोस्ट तपाईं हामीलाई हटाउन चाहनुहुन्छ लिङ्क mummichogblog@gmail.com लागि ई-मेल पठाउनुहोस्।
ला Vita degli italiani Che vivono एक माल्टा।
Guida di इटाली मा-लाइन con informazione utile ई gratuite प्रति chiunque voglia venire मा Vacanza एक माल्टा ई vivere nell ‘Isola।
संयुक्त राष्ट्र sito इन्टरनेट dedicato अल्ला diffusione di notizie मा Lingua Italiana concernenti माल्टा ई l’arcipelago मालटिस्।
Consigli ई समीक्षा su negozi, locali, मामला ecc
Eventi ई manifestazioni।
Possibilità di lavoro … एड altro लंगर।
Aggiungete tutti Gli italiani di vostra conoscenza Che vivono sull’isola di माल्टा।
ब्लग dedicato agli italiani Che lavorano, studiano ओ vivono एक माल्टा!
Speriamo Che म contenuti डेल sito siano utili एक ची सी trasferisce एक माल्टा प्रति qualche टेम्पो … qui potrete trovare interviste, जानकारी, consigli ई dritte प्रति poter vivere अल meglio ला vostra esperienza मालटिस्!
Isola di माल्टा।
Storie di ITALIANI एक माल्टा।
Pressemelding fra departementet til det nasjonale kulturminnet, kunst og lokale myndigheter
Etter en koordinert oppgave ved Institutt for Kommunal- i departementet for National Heritage, kunst og Kommunal- og Mita har en digital plattform blitt introdusert og dermed per i dag, kan de kommunale møtene avholdes på nettet. Gjennom denne plattformen, vil lokale myndigheter kunne utføre sine møter uten behov for direkte kontakt mellom rådgivere.
Ministeren José Herrera gjentok at departementet, sammen med Institutt for Kommunal-, holder kontinuerlig diskusjoner og arbeider tett med kommunene og kommunene Forbund. Innføringen av den digitale plattformen er en av en rekke tiltak og handlinger som blir iverksatt for å ivareta arbeidstakernes helse, rådgivere og allmennheten.
Departementet ønsker å vise sin takknemlighet til de kommunene Forbundet, ordførere, rådmenn, den utøvende sekretærer og deres tilknytning, samt alle ansatte for deres samarbeid og kontinuerlig arbeid de utfører til fordel for den maltesiske og Gozitan lokalsamfunn.